ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > ယုံကြည်ခြင်းအရာသည် WCG သတ်မှတ် > ခရစ်ယာန်ဥပုသျနေ့
Der christliche Sabbat ist das Leben in Jesus Christus, in dem jeder Gläubige wahre Ruhe findet. Der wöchentliche Siebente-Tags-Sabbat, der Israel in den Zehn Geboten befohlen wurde, war ein Schatten, der als Zeichen auf die wahre Realität verwies auf unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus. (Hebräer 4,3.8-10; Matthäus 11,28နှစ်ဆယ် 2. Mose 20,8-11; Kolosser 2,16-17)
၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်ပေးသောကျေးဇူးတရားများကိုတုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။ Egyptသရေလလူတို့အဘို့အဲဂုတ္တုပြည်မှထွက်ခွာသွားခြင်းအတွေ့အကြုံသည်ဝတ်ပြုရေး၏ဗဟိုတွင် - သူတို့အတွက်ဘုရားသခင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည့်အရာဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်များအတွက် the ၀ ံဂေလိတရားသည် ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၏ဗဟိုချက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်ယုံကြည်သူအားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်ခြင်းတွင်လူအားလုံး၏ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ရွေးနုတ်ခြင်းအတွက်ယေရှုခရစ်၏ဘဝ၊ သေခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကျင်းပကြသည်။
Israelသရေလလူမျိုးအားပေးသောဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုပုံစံကိုသူတို့အတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည်theသရေလလူတို့အားမောရှေမှတစ်ဆင့် ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းပုံစံကိုပေးခဲ့သည်။ ထိုနည်းအားဖြင့်ofသရေလလူမျိုးများအားအီဂျစ်ပြည်မှကတိထားရာပြည်သို့ခေါ်ဆောင်လာချိန်တွင်သူတို့အတွက်ဘုရားသခင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည့်အရာအားလုံးအတွက်thankသရေလလူမျိုးများအားဘုရားသခင်အားဂုဏ်ပြုချီးမြှောက်နိုင်သည်။
Die christliche Anbetung erfordert keine Vorschriften, die auf den alttestamentlichen Erfahrungen Israels mit Gott beruhen, sondern sie reagiert vielmehr auf das Evangelium. Analog dazu können wir sagen, der «neue Wein» des Evangeliums müsse in «neue Schläuche» gefüllt werden (Matthäus 9,17). Der «alte Schlauch» des Alten Bundes war nicht dazu angetan, den neuen Wein des Evangeliums aufzunehmen (Hebräer 12,18-24) ။
အစ္စရေးဝတ်ပြုရေးသည်Israelသရေလလူမျိုးအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းသည်ခရစ်တော်ကြွလာသည်အထိကြာရှည်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ဘုရားသခင့်လူမျိုးတော်သည်ပုံစံအသစ်ဖြင့်သူတို့၏ကြည်ညိုလေးမြတ်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းအားဖြင့်အကြောင်းအရာအသစ်ဖြစ်သောယေရှုခရစ်၌ဘုရားသခင်ပြုခဲ့သောလွန်ကဲသောအရာသစ်ကိုတုန့်ပြန်ခဲ့သည်။ ခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အသွေးတော်၌ထပ်မံပါဝင်ခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်ခြင်းတို့ကိုအဓိကထားသည်။ အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းများမှာ
ကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်း - ဘုရားသခင့်မေတ္တာတော်နှင့်ကတိတော်များ၊ အထူးသဖြင့်ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်အားဖြင့်ကျွေးမွေးသောကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်၏ကတိတော်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်သည်။
ဆုတောင်းခြင်းနှင့်သီချင်းများ - ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်နှိမ့်ချစွာဖြင့်အပြစ်များကိုနောင်တရပြီးဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းစွာဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းသည်။
ခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်မှုသည်အကြောင်းအရာနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုအခြေခံသည်။ တရားဝင်သို့မဟုတ်ယာယီသတ်မှတ်ချက်များမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်ခရစ်ယာန်ဝတ်ပြုမှုသည်သီတင်းပတ်တစ်ရက်သို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရာသီတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ခရစ်ယာန်များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောနေ့ရက်သို့မဟုတ်အချိန်ကိုလည်းသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်ခရစ်ယာန်များသည်ယေရှု၏ဘဝနှင့်လုပ်ငန်းတော်၏အရေးကြီးသောမှတ်တိုင်များကိုကျင်းပရန်အထူးရာသီများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ထိုနည်းတူစွာပင်ခရစ်ယာန်များသည်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ရက်တစ်ကြိမ်ထမင်းစားပြီး ၀ တ်ပြုရန် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ သူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုဂုဏ်တင်ရန်ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်အတူတကွစုရုံးကြသည်။ ခရစ်ယာန်အများစုသည်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ကိုးကွယ်ရန်ရွေးချယ်ကြပြီးအချို့မှာစနေနေ့တွင်ကိုးကွယ်ကြပြီးအချို့သည်အခြားအချိန်များတွင်စုရုံးကြသည်။
တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်များသတ္တမနေ့မှဥပုသ်စောင့်သူများစွာကိုအံ့အားသင့်စေနိုင်သော်လည်းခရစ်ဝင်ကျမ်းများသည်တနင်္ဂနွေနေ့၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအဓိကအဖြစ်အပျက်များကိုအထူးဖော်ပြသည်။ အသေးစိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်လေ့လာပါမည်။ ခရစ်ယာန်များသည်တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ၀ တ်ပြုရန်မလိုအပ်သော်လည်း ၀ တ်ပြုရန်စုရုံးခြင်းအတွက်တနင်္ဂနွေနေ့ကိုရွေးချယ်ရန်အကြောင်းမရှိပါ။
Das Johannes-Evangelium berichtet, dass die Jünger Jesu am ersten Sonntag nach der Kreuzigung Jesu zusammenkamen und dass Jesus ihnen erschienen sei (Johannes 20,1). Alle vier Evangelien berichten übereinstimmend, dass Jesu Auferstehung von den Toten am Sonntag in der Frühe entdeckt wurde (Matthäus 28,1; မာကု ၁6,2; လုကာ ၂4,1; Johannes 20,1).
four ၀ ံဂေလိဆရာလေး ဦး စလုံးသည်ဤဖြစ်ရပ်များကိုတနင်္ဂနွေနေ့တွင်တိကျသောအချိန်၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟုဖော်ပြရန်အရေးကြီးသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ သူတို့ဟာအသေးစိတ်မပါဘဲလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများကယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုထမြောက်တော်မူသောမေရှိယအဖြစ်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ဖော်ပြခဲ့သည် - နံနက်စောစော၊ ထို့နောက်မွန်းတည့်အချိန်၌နောက်ဆုံးညနေခင်း၌ဖြစ်သည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးသောယေရှု၏တနင်္ဂနွေနေ့ကပေါ်ပေါက်ခဲ့သောSundayဝံဂေလိဆရာများသည်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ မဟုတ်ဘဲသူတို့ကဤအရာအားလုံးကိုရက်သတ္တပတ်၏ပထမနေ့၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြလိုကြသည်။
သခင်ယေရှုအသတ်ခံရခြင်းအပြီးပထမတနင်္ဂနွေအကြောင်း ev ၀ ံဂေလိဆရာများပြောသောအရေးကြီးသောအချက်အချို့ကိုပြန်သတိရကြပါစို့။
Jesus wurde von den Toten auferweckt (Lukas 24,1-8 ။ ၄၀3. 21) ။
Jesus wurde erkannt, als er «das Brot brach» (Lukas 24,30-31. 34-35) ။
Wie Lukas in der Apostelgeschichte 20,7 berichtet, predigte Paulus den Gemeindemitgliedern in Troas, die am Sonntag versammelt waren, «das Brot zu brechen». Im 1. ကောရိန္သု ၁6,2 forderte Paulus die Gemeinde in Korinth wie auch schon die Gemeinden in Galatien (16,1) auf, an jedem Sonntag eine Spende für die Hunger leidende Gemeinde in Jerusalem zurückzulegen.
Paulus sagt nicht, die Gemeinde müsse sich am Sonntag versammeln. Doch seine Aufforderung lässt darauf schliessen, dass sonntägliche Zusammenkünfte nichts Ungewöhnliches waren. Als Grund für die wöchentliche Spende führt er an, «damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme» (1. ကောရိန္သု ၁6,2). Wenn die Gemeindemitglieder ihre Spende nicht jede Woche anlässlich einer Zusammenkunft abgegeben, sondern das Geld zu Hause beiseite gelegt hätten, wäre bei der Ankunft des Apostels Paulus immer noch eine Sammlung erforderlich gewesen.
Diese Passagen lesen sich so natürlich, dass wir erkennen: Es war keineswegs ungewöhnlich, dass Christen am Sonntag zusammenkamen, und es war auch nicht ungewöhnlich, dass sie bei ihren sonntäglichen Zusammenkünften gemeinsam «das Brot brachen» (ein Ausdruck, den Paulus mit dem Abendmahl verbindet; siehe 1. ကောရိန္သု 10,16-17) ။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှမှုတ်သွင်းခံevဝံဂေလိတရားဟောပြောသူများသည်သခင်ယေရှုတနင်္ဂနွေနေ့၌ထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားသတိရှိရှိပြောပြလိုကြသည်။ အနည်းဆုံးယုံကြည်သူအချို့သည်တနင်္ဂနွေနေ့၌မုန့်ဖုတ်ရန်စုရုံးကြသောအခါသူတို့လည်းစိုးရိမ်စရာမရှိခဲ့ပါ။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ခရစ်ယာန်များအတူတကွစည်းဝေးရန်ခရစ်ယာန်များကိုအထူးညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိသော်လည်းဤဥပမာများအရပြaboutနာနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်မှမပါရှိပါ။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းခရစ်ယာန်များသည်ဘုရားသခင်နှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ရန်ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်တနင်္ဂနွေတွင်အတူတကွစုရုံးရန်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်များရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ခရစ်ယာန်များသည်တနင်္ဂနွေနေ့ကိုသူတို့၏အစည်းအဝေးနေ့အဖြစ်ရွေးချယ်ရန်လိုသလား။ နံပါတ် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းသည်အချို့သောနေ့ရက်များပေါ်တွင်အခြေမခံပါ။ ဘုရားသခင်နှင့်သားတော်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။
သတ်မှတ်ထားသောပွဲနေ့တစ်ရက်ကိုအခြားတစ်ခုဖြင့်အစားထိုးခြင်းသည်မှားသည်။ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်းသည်သတ်မှတ်ထားသောနေ့ရက်များမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခမည်းတော်ဘုရားသခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်ကိုသိပြီးချစ်မြတ်နိုးခြင်းဖြစ်သည်။
အခြားယုံကြည်သူများနှင့်မည်သည့်နေ့တွင် ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမှန်ကန်သောအကြောင်းပြချက်ပေါ်အခြေခံသင့်သည်။ “ ယူ၍ စားကြလော့။ ဤသူကားငါ၏ကိုယ်ဖြစ်၏” နှင့်“ ထိုအရာအားလုံးမှသောက်” သည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်နေ့နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ အစောပိုင်းချာ့ချ်၏အစတွင်လူမျိုးခြားခရစ်ယာန်များသည်ခရစ်တော်၏သဟာယတွင်တနင်္ဂနွေ၌စုရုံးကြခြင်းသည်အစဉ်အလာဖြစ်သည်။
ဥပုသ်စောင့်ရန်ခရစ်ယာန်များကိုဘုရားသခင်တောင်းဆိုထားသည်သို့မဟုတ်မောရှေ၏ပညတ်တရားကိုလိုက်နာရန်ဘုရားသခင်ကတောင်းဆိုသည်ဟူသောအမြင်ကကျွန်ုပ်တို့အားခရစ်တော်၌ဘုရားသခင်ပေးလိုသောရွှင်လန်းမှုကိုအပြည့်အဝမခံစားရကြောင်းဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားသူ၏ရွေးနှုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုယုံကြည်စေလိုပြီးသူတစ် ဦး တည်း၌သာကျွန်ုပ်တို့၏အနားယူခြင်းနှင့်နှစ်သိမ့်မှုရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်သည်ကိုယ်တော်၏ကျေးဇူးတော်၌တည်နေ၏။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အပတ်စဉ်ဥပုသ်သည်ခရစ်ယာန်များအတွက်ဘုရားသခင့်သန့်ရှင်းသောနေ့ဖြစ်သည်ဟူသောအယူအဆကိုမေးခွန်းထုတ်နေခြင်းကိုစာရေးကသူမသူမကျေနပ်ကြောင်းဖော်ပြသည့်စာတစ်စောင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရံဖန်ရံခါရရှိကြသည်။ သူတို့ကမည်သူမဆိုပြောဆိုပါစေ၊ သူတို့သည်“ လူ၏စကားထက်ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကိုနားထောင်လိမ့်မည်” ဟုပြောဆိုကြသည်။
ဘုရားသခင့်အလိုတော်ဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကိုအသိအမှတ်ပြုရမည်။ ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ထံမှအမှန်တကယ်မျှော်လင့်သောအရာသည်မှားယွင်းသောအရာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အားနာခံခြင်းသည်အပတ်စဉ်ဥပုသ်နေ့ကိုသန့်ရှင်းမြင့်မြတ်စေခြင်းဖြစ်သည်ဟုဥပုသ်များ၏လေးနက်စွာခံယူချက်ကစဉ်း စား၍ မရသောခရစ်ယာန်များအနေဖြင့်ဥပုသ်များ၏ရှုမြင်ပုံသည်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်မှားယွင်းမှုကိုပြသသည်။
တစ်ဖက်တွင်မူ၊ ဥပုသ်အယူဝါဒသည်ဘုရားသခင်အားနာခံခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသမ္မာကျမ်းစာနှင့်မညီသောနားလည်မှုကိုကြေငြာသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ နာခံမှုကိုဤနားလည်မှုသည်ခရစ်ယာန်သစ္စာရှိမှုအတွက်သတ်မှတ်ချက်ကိုဖြစ်စေသည်။ ရလဒ်မှာဓမ္မသစ်ကျမ်းသင်ကြားမှုအရပညတ်တရားကိုလိုက်နာရန်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌ကွဲပြားခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသောဘုရားသခင်အားနားလည်ခြင်းသည် "အခြားသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆန့်ကျင်သည်" ဟူသောထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်သောအတွေးအခေါ်တိုးတက်လာသည်။ မမှန်ကန်ပါ
Treue Einhaltung des wöchentlichen Sabbats ist keine Frage des Gehorsams vor Gott, weil Gott von den Christen gar nicht verlangt, dass sie den wöchentlichen Sabbat heiligen. Gott fordert uns auf, ihn zu lieben, und unsere Liebe zu Gott wird nicht durch die Einhaltung des wöchentlichen Sabbats bestimmt. Sie wird bestimmt durch unseren Glauben an Jesus Christus und unsere Liebe zu unseren Mitmenschen (1. ဂျိုဟန် 3,21နှစ်ဆယ် 4,19-21). Es gibt, so sagt die Bibel, einen neuen Bund und ein neues Gesetz (Hebräer 7,12; 8,13; 9,15).
ခရစ်ယာန်ဆရာများသည်အပတ်စဉ်ဥပုသ်ကိုခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း၏တရားဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်မှားသည်။ ဥပုသ်ပညတ်ကိုခရစ်ယာန်များလိုက်နာရန်ဟူသောအယူအဆသည်ခရစ်ယာန်သြတ္တပ္ပစိတ်ကိုပျက်စီးစေသောတရား ၀ င်ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ဝန်ပိစေခြင်း၊ of ၀ ံဂေလိတရား၏အမှန်တရားနှင့်တန်ခိုးကိုဖုံးကွယ်ခြင်းနှင့်ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကွဲပြားခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Die Bibel sagt, Gott erwarte von den Menschen, dass sie dem Evangelium Glauben schenken und ihn lieben (Johannes 6,40; 1. ဂျိုဟန် 3,21နှစ်ဆယ် 4,21; 5,2). Die grösste Freude, die Menschen widerfahren kann, ist die, dass sie ihren Herrn erkennen und lieben (Johannes 17,3), und diese Liebe wird nicht durch die Einhaltung eines bestimmten Wochentages definiert oder gefördert.
Das christliche Leben ist ein Leben der Geborgenheit in der Freude des Erlösers, der göttlichen Ruhe, ein Leben, in dem jeder Teil des Lebens Gott gewidmet und jede Aktivität ein Akt der Hingabe ist. Die Beobachtung des Sabbats als ein definierendes Element des «wahren» Christentums zu etablieren, bewirkt, dass man viel von der Freude und der Kraft der Wahrheit verpasst, dass Christus gekommen ist und dass Gott in ihm mit allen, die der guten Nachricht glauben, einen neuen Bund (Matthäus 26,28; ဟီး
9,15), aufgerichtet hat (Römer 1,16; 1. ဂျိုဟန် 5,1).
ဒါဟာမင်းရဲ့စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုကြေငြာချက်ကိုချိတ်ဆွဲပြီးမင်္ဂလာဆောင်ရှည်လျားပြီးတဲ့နောက်မှာပျော်မွေ့လိုတဲ့သဘောပဲ။ ယင်းအစား၊ မိတ်ဖက်ကိုအဓိကအာရုံစိုက်ရန်နှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုကိုသာယာသောမှတ်ဉာဏ်အဖြစ်နောက်ကွယ်သို့မှေးမှိန်စေရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
ဥပုသ်ပညတ်ကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးသောတရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၌ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းသို့မဟုတ်ရှုတ်ချခြင်းကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသည်ဟုယုံကြည်သောသူသည်အပြစ်နှင့်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုနားလည်မှုလွဲခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပုသ်နေ့သည်သန့်ရှင်းသူများသာလျှင်ရွေးနုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါကဥပုသ်နေ့သည်တိုင်းတာသည့်အတိုင်းအတာဖြစ်သည်။ ငါတို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်။ ဘုရားသခင်၏သားတော်မဟုတ်၊
ဥပုသ်နေ့ကိုစောင့်ထိန်းသူများသည်ဘုရားသခင်၌မကျင့်သောသူတို့၌ ပို၍ ပျော်မွေ့ကြောင်းဥပုသ်စောင့်သူများကယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော်ဤဆင်ခြင်ခြင်းသည်သမ္မာကျမ်းစာမှမဟုတ်ပါ။ မောရှေ၏ပညတ်တရားအားလုံးကဲ့သို့ဥပုသ်ပညတ်ကိုယေရှုခရစ်၌ဖျက်သိမ်းပြီးပိုမိုမြင့်မားသောလေယာဉ်ပေါ်တွင်တင်ထားသည်ဟုသမ္မာကျမ်းစာကသွန်သင်သည်။
ထို့ကြောင့်ဥပုသ်စောင့်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်၌ သာ၍ ပျော်ရွှင်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဥပုသ်နေ့ကိုခရစ်ယာန်များအားမပေးခဲ့ပါ။ ဥပုသ်နေ့၏ဘာသာရေးအရပျက်စီးစေသောအရာသည်ဥပုသ်စောင့်ခြင်းအားထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းမရှိလျှင်လူသားတို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်သခင်ယေရှု၏အသွေးတော်သည်ဥပုသ်နေ့များသည်တစ်ခုတည်းသောစစ်မှန်သောယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
Die Bibel widerspricht einer solch irrigen Lehrmeinung in vielen aussagekräftigen Textstellen: Wir werden aus der Gnade Gottes erlöst, allein durch den Glauben an das Blut Christi und ohne Werke irgendwelcher Art (Epheser 2,8စာ-၉; ရောမ 3,21နှစ်ဆယ် 4,4နှစ်ဆယ် 2. တိမောသေ 1,9; တိတု 3,4-8). Diese klaren Aussagen, dass Christus allein und nicht das Gesetz für unsere Erlösung entscheidend ist, stehen eindeutig in Widerspruch zu der sabbatarischen Doktrin, Menschen, die nicht den Sabbat heiligen, könnten keine Erlösung erfahren.
ပျမ်းမျှ Sabbatarian သည်သူသည်ဥပုသ်မစောင့်သူထက်ဘုရားသခင်အလိုတော်ပိုမိုပြုမူသည်ဟုထင်သည်။ ယခင် WKG ထုတ်ဝေမှုများမှအောက်ပါထုတ်ပြန်ချက်များကိုကြည့်ကြပါစို့။
Sabbatarian ဘာသာရေးသည်ယေရှုခရစ်၌ရှိသောဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်နှင့်သမ္မာကျမ်းစာ၏ရှင်းလင်းသောသတင်းစကားကိုဆန့်ကျင်သည်။ ဥပုသ်ပညတ်အပါအဝင်မောရှေပညတ်သည်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအတွက်မဟုတ်ဘဲIsraelသရေလလူမျိုးများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ခရစ်ယာန်များသည်သီတင်းပတ်တိုင်းဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုရန်လွတ်လပ်စွာနေသင့်သည်ဖြစ်သော်လည်းစနေနေ့ကိုအခြားနေ့ရက်မတိုင်မီအစည်းအဝေးနေ့အဖြစ်ပြောင်းရန်သမ္မာကျမ်းစာအကြောင်းပြချက်အချို့ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မှားယွင်းစွာမပြုမိပါစေနှင့်။
ဘုရားသခင်ကဥပုသ်နေ့ကိုစောင့်ထိန်းသူများသည်သတ္တမနေ့ဖြစ်စေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်စေဥပုသ်နေ့ကိုစောင့်ထိန်းသူများထက် ပိုမို၍ ပျော်ရွှင်သည်ဟုဆိုခြင်းမှာသမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်သည်မှာဘုရားရှိခိုးကျောင်းအသိုင်းအ ၀ ိုင်းအတွက်နေ့ရက်တစ်ခုသည်ဘုရားသခင်ထက်ပိုမိုသန့်ရှင်းသောသို့မဟုတ်ပိုမိုလိုလားသောဆန္ဒရှိသောနေ့ရက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်းကဆန့်ကျင်သည်။
Sunday ၀ ံဂေလိတရားတွင်တနင်္ဂနွေနေ့၌ဖြစ်ပွားသောအဓိကအဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိပြီးထိုနေ့တွင်ဝတ်ပြုရေးအတွက်စုရုံးခြင်း၏ခရစ်ယာန်အစဉ်အလာ၏အခြေခံဖြစ်သည်။
ငါတို့ကိုရွေးနုတ်ခြင်းငှါလာသောသူသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ထမြောက်တော်မူသည်အတိုင်းငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြ၏။ ထို့ကြောင့်တနင်္ဂနွေနေ့ဝတ်ပြုခြင်းသည် the ၀ ံဂေလိတရားအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ချက်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ သို့သော်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်လူမျိုးပေါင်းစုံဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုမလိုအပ်ပါ။ ထို့အပြင်တနင်္ဂနွေနေ့ဝတ်ပြုမှုသည်ခရစ်ယာန်များကိုသန့်ရှင်းသောအရာသို့မဟုတ်ဘုရားသခင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအခြားရက်သတ္တပတ်၏မည်သည့်နေ့၌မဆိုဖြစ်စေသည်။
ဥပုသ်နေ့သည်ခရစ်ယာန်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟူသောအယူဝါဒသည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာပျက်စီးမှုကိုဖြစ်စေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုအယူဝါဒများသည်ကျမ်းစာနှင့်ဆန့်ကျင်။ ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းစည်းလုံးမှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအန္တရာယ်ကျရောက်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန်များသည်စနေနေ့ (သို့) တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်ပြန်လည်စုဆောင်းသင့်သည်ဟုယုံကြည်ပြီးသွန်သင်ခြင်းက ၀ ိညာဉ်ရေးကိုထိခိုက်စေသည်။
တ ဦး တည်းနောက်ဆုံးအတွေး
သခင်ယေရှု၏နောက်လိုက်များအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သြတ္တပ္ပစိတ်နှင့်အညီဘုရားသခင်ရှေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သောအမှုများတွင်အချင်းချင်းမစစ်ဆေးရန်သင်ယူသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏နောက်ကွယ်အကြောင်းရင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိကိုယ်ကိုရိုးသားစွာပြောဆိုရန်လိုအပ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ယုံကြည်သူများကိုဘုရားသခင်၏ငြိမ်သက်ခြင်းအပြည့်အ ၀ နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းသို့ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုမိန့်မှာသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအချင်းချင်းချစ်ကြပါစို့။
သူ Mike Feazell